Penny Auction Software | Ụgbọ ibu azụmahịa - RapidAuctionSoft
The Kacha ọhụrụ & kasị oge a Penny Auction Software Ngwọta Dị Jụọ banyere anyị 14 n'efu ụbọchị ikpe
ekwentị: +1 603-557-1563
Menu	+ × gbasaa osụhọ
Mkpatụ Solid Ngụọge World Class Support
Mmadụ Bịa ka RapidAuctionSoft – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of Penny Auction Software and the Best PHP Penny Auction Script dị
Jụọ banyere anyị 10% price egwuregwu guaranty 1-603-557-1563
Anyị bụ ugbu a ike na-enye dobe shipper integrations, na-enye gị a zuru turnkey ọrụ!!!
Nwere a penny auction website?
Ndi gị software nwoke na-ere ahapụ gị unsupported?
Ọ bụ na ọ dabeere na n'elu ochie technology?
Ò nwere ihe chinchi?
Unu ozi-ejedebe na spam?
Bụ gị SEO-adịghị arụ ọrụ? Ọ bụghị mobile friendly?
Anyị nwere ike iwekota gị imewe na ọdịnaya n'ime anyị ukwuu elu usoro
New Update – Agụnye mma nkuku oyiyi (ịhọrọ site na 3 ekwekọghị na 8 agba, niile ike ederede ugbu a asụsụ na-akwado dị ka nke ọma), RSS, RSS + Atọm na-azụ, Sitemaps maka auctions na CMS ọdịnaya na ọtụtụ ndị ọzọ mgbanwe!!!
Anyị na-atụ anya gị kwurịta banyere Penny Auction weebụsaịtị echiche gị. Ọ bụla ahịa nwere echiche nke onwe ha na-atọ anyị ụtọ na-ede omenala Auction Code, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju maka anyị. Anyị na-enweta obi ụtọ banyere ihe niile anyị na ndị ahịa echiche, n'ezie na ọ bụ akụkụ kasị mma nke ọrụ anyị…anyị hụrụ n'anya na-eso gị obi ụtọ
Kpọọ anyị n'oge ọ bụla, Anyị na-arụ ọrụ na esenidụt ụlọ ọrụ oge niile
Ya mere, ị na-akwa banyere ihe e-azụmahịa ma ọ bụ Penny Auction Software azụmahịa?
I mere gị nnyocha na nụrụ ọjọọ akụkọ banyere ndị ọzọ e-azụmahịa nyiwe, na na-na-eche banyere ịzụ si a reputable iyi. Ọfọn, anyị nwere gị azụ. Na free upgrades A guaranty na kasị mma na azụmahịa na ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ikpe oge na anyị hụrụ. Gbalịa ya maka 14 ụbọchị n'ihe ize ndụ free na otu nke sava anyị…na mgbe ị dị njikere idokwa ka gị onwe gị na ihe nkesa, ma ọ bụ họrọ otu pof anyị kwadoro ngwọta
N'ihi na a obere oge anyị nwere ohere maka 3 beta ule weebụsaịtị….ndị a 3 weebụsaịtị na idokwa na ule ihe akpọrọ ga-esi n'ebe ahụ software for free maka ndụ…ewepu omenala imewe ma ọ bụ mmemme. Ziga ozi banyere beta ule na anyị mmepe otu
kacha n'oge a
Penny Auction akwukwọ
Ị mkpa a Penny Auction Software Ngwọta, Penny Auction Edemede Solutions ma ọ bụ ihe E-Commerce Ngwọta
Best Penny Auction Software, Penny Auction Edemede Ngwọta Dị
na 2018 anyị chọpụtara na ọtụtụ na-ere ákwà nke Penny Auction Software na E-azụmahịa software na-eji ihe mgbe ochie usoro na obere ma ọ bụrụ na ọ dịghị oge a frameworks. Ya mere, anyị malitere ede, anyị dere anyị koodu si n'ala bilie iji CodeIgniter maka anyị PHP. CodeIgniter bụ oge a na MVC Framework (model, echiche, njikwa), nke kewara mgbagha na ebe ọ dị mkpa, ọ bụ ibu mfe na-amụta na-enwe maka ihe, bụ ngwa ngwa karịa ahụkarị PHP, pụrụ ịdabere na ndị ọzọ ga-eme n'ọdịnihu àmà na-egosi.
Ma nke ahụ bụ ezughị, anyị na-ahụ ghọtara na ihe mere kasị PHP naanị Penny Auction Software sava ida bụ n'ihi na ha dabere n'ebe AJAX Ngụọge, bidding na izi ozi. Ya mere kpaliri niile a ka Socket.io na Node.JS. Nke pụtara na ihe nkesa ike izipu ozi ozugbo na ahịa na-enweghị mkpa maka ahịa na nọgidere na-arịọ ọhụrụ data. Anyị Ngụọge n'ezie soro bidding na 1000th si of a abụọ. Nke pụtara na anyị bidding bụ ngwa ngwa, ọzọ mụ na ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na karịa ndị ọzọ na ngwọta. Echegbula onwe gị banyere onye mkpesa banyere a furu efu ikpeazụ abụọ ikele. Anyị bidding na-esoro ndị ọzọ n'ụzọ ziri ezi karịa ndị ọzọ na saịtị. Ị nwere ike n'ụzọ nkịtị na-ahụ elu bidder mgbanwe n'ime otu nke abụọ ma ọ bụrụ na multiple ọrụ na-agwa n'otu oge.
World klas Penny Auction Design
N'ikpeazụ, anyị ghọtara kasị nwere ahịa bụ ihe ọma na-akwụ ụgwọ maka mba na mmezi na mfe kwa ọnwa ịkwụ ụgwọ, na pụrụ ịdabere na ibu guzozie eguzozie sava, nyere site onye nke kasị mma server ụlọ ọrụ dị na ụwa! Ya mere, anyị aka niile n'ihi na ị. Ọ bụrụ na ị outgrow a nkịtị server, mgbe ahụ, anyị nwere ike na a ga-akpali gị na gị onwe gị na ihe nkesa ma ọ bụrụ na mkpa. Ma, ị ga-ka nwere niile uru nke anyị version achịkwa software.
N'ihi na a mmachi niile oge niile ọhụrụ ahịa na-enweta free echichi, 5 awa nke ọzụzụ na 5 awa nke free imewe.
Anyị na-enye ihe karịrị nnọọ Penny Auction Solutions
Jụọ anyị banyere anyị ahịa ụgbọ plugin.
Akwado mgbakwunye na nke asụsụ ọhụrụ
Mkpatụ Solid Ngụọge, esoro na thousandths nke a nke abụọ. Na-eme ka ya kasị ezi bidding usoro dị.
MEGODỊ tupu ị zụrụ. Free 2 izu ikpe.
Ugbu Clones agụnye
Anyị na-enwe 25 Penny Auction Software themes na ike ga-etinyere ihe niile anyị na ngwaahịa, pụtara ukwuu mgbanwe na Design gị Penny auction Software
Jụọ anyị banyere ndị ọzọ auction ụdị, anyị na-eme ọtụtụ ihe karịa nnọọ Penny Auction Software
Lelee anyị ndụ demos On anyị demo saịtị!!!
Penny Auction Software Atụmatụ
Registration emekarị tupu ịtụkwasị a ikele, onye ọrụ a chọrọ ka aha.
Nbanye Ọrụ nwere ike leverage na ọtụtụ uru nke ịbụ a so – abanye na akaụntụ ha page, ebe a ikele, tinye ego na akaụntụ ha na ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ.
Ịzụta Ebe E Si Nweta / Tinye Balance Ọrụ nwere ike ịzụta kaadị ma tinye itule ka ha na akaụntụ ma site na ugwo ụzọ ámá, akụ, ma ọ bụ kpọmkwem ego tupu ịtụkwasị a ikele.
Ebe n'akpọ Ọrụ nwere ike họrọ a ngwaahịa na-edebe a ikele. The ọrụ nwere ike idowe dị ka ọtụtụ ọnụ ekwegasịrị dị ka ha chọrọ ruo mgbe ha merie. Ha nwekwara ike ma ebe a otu ikele ma ọ bụ chekwaa ha ikele na iji Bidbutler na-akpaghị aka na-agwa ha na n'ihi.
Bidbutler Bidbutler, na-akpọkwa autobid ma ọ bụ ndị nna ha ukwu ikele, bụ ebe usoro nsị gị zọpụta ọnụ ekwegasịrị akpaghị aka iri ọ bụla sekọnd, ma ọ bụ bụla nkeji gị ezipụta.
SMS n'akpọ unu adịghị mkpa aha na abanye na ihe SMS ikele. The SMS bidding ọmụma nwere ike hụrụ na ndị yiri auction na ike ga-setịpụrụ onye nchịkwa nke saịtị.
Live ikele History Ọrụ nwere ike ịhụ ha onwe ha na ndị ọzọ na bidding eme si ikele akụkọ ihe mere eme ngalaba n'ime ngwaahịa nkọwa page.
Winner The eto eto, nke auction bụ onye ikpeazụ ebe a ikele mgbe oge esịmde efu sekọnd. The eto eto na-akwụ ndị ikpeazụ price maka auction item (nke ga-ala karịa n'ezie price).
Types of Auction E nwere ọtụtụ ụdị nke auction ke ahịa; Otú ọ dị, ndị kasị ewu ewu ụdị ndị Ịgachi Auction, Ofu Price Auction, Nilbitter Auction, Free Auction na Rookie Auction.
CMS The ọdịnaya management usoro (CMS), na-ebe ị nwere ike ịmepụta dị iche iche search-engine enyi na enyi peeji nke gị auction saịtị – dị ka About anyị, Kpọtụrụ anyị, amụma nzuzo, okwu & ọnọdụ, FAQ si, Enyemaka, Olee otú Ọ na-arụ ọrụ na otú pụta.
11 User Account
Ugbu Bidding Auction List – Ebe i nwere ike na-ele gị Ugbu A / Live Auction si bidding ọmụma.
MERIRI Auction List – Si ebe a ị nwere ike ịlele gị na ndepụta nke meriri auctions na-akwụ ndị ikpeazụ price.
Ikele History Archive – Ọrụ nwere ike ele ha ikele Archive si ebe a.
Tinye Hụrụ (Ịzụta ikele Pack) – Ọrụ nwere ike tinye itule iji etinye a ikele si na nkebi nke a.
Ụzọ nkwụnye ụgwọ – Ọrụ nwere ike họrọ ihe ọ bụla ugwo usoro, niile nnọọ pụrụ ịdabere na, na-akwụ auction ikpeazụ price. PayPal bụ ndabere ugwo ụzọ ámá.
azụmahịa History – Ọrụ nwere ike na-ele niile ha azụmahịa eme site na nke a na ngalaba.
gbapụta Code – Ọrụ nwere ike gbapụta pụrụ iche na-enye codes na-nyere site admin dị ka otu ụdị nke saịtị na nkwalite.
Rụtụ a Enyi – Ọrụ nwere ike na-ezo dị ka ọtụtụ ndị enyi dị ka ha chọrọ. N'ihi na ọ bụla Ntuziaka ha nwekwara ike inweta ego e si nweta setịpụrụ admin.
Gbanwee okwuntughe – Ọrụ nwere ike ịgbanwe ha akaụntụ paswọọdụ si ebe a.
mechiri emechi Account – Ọrụ nwere ike na-emechi ha akaụntụ na ha nwere ike ghara imeghe ha na akaụntụ na otu email address ọzọ.
Akwụkwọ Akụkọ Setting – Ọrụ nwere ike ma nwee ma ọ bụ gbanyụọ na ala na ndenye aha nhọrọ si na nkebi nke a.
Idenye aha Akwụkwọ Akụkọ Ọbịa nwere ike banye maka okushon ala na-enweta Ịma Ọkwa, mmelite na-enye.
Category Management The admin ike ijikwa (tinye, dezie ma ọ bụ ihichapụ) edemede na search maka na edemede ma site aha ma ọ bụ ID.
Auctions Management Admin nwere ike tinye, dezie ma ọ bụ hichapụ auctions ma chọọ ha site aha, ọnọdụ, ụdị na ID. The admin nwekwara ike iṅomi otu auction nakwa dị ka anya n'ime ya si bidding akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ na nkọwa.
Auctions Report / nzipu Admin pụrụ ịhụ akụkọ nke na-emeri auction ma ọ bụ nkọwa nke-eto eto. The admin nwere ike ịgbanwe auction si rue mgbe ọnọdụ nnyefe si na nkebi nke a.
Weebụsaịtị Isetịpụ The admin nwere ike ịtọ saịtị ntọala si na nke a na ngalaba.
Member Management The admin nwere ike ma tinye, dezie ma ọ bụ ihichapụ ọrụ ma ọ bụ ịchọ ha ọnọdụ, aha na ID. The admin nwekwara ike ịhụ ọrụ 'bidding & azụmahịa akụkọ ihe mere eme.
Email Isetịpụ The admin nwere ike ịhọrọ email ọnọdụ site na nke a na ngalaba – rụọ ọrụ email, chefuru paswọọdụ etc.
Winner Management The admin ike ịtọ eto eto ndepụta na ha image, address, na ha na-azaghachi.
Site Statistics The admin nwere ike na-ele website akụkọ na mbupụ akụkọ na CSV format.
Oge Mpaghara Isetịpụ The admin nwere ike ịtọ ya mba oge mpaghara ọnọdụ site na nke a na ngalaba.
Special Nye / Promotion Management
Oge The admin nwere ike ịtọ pụrụ iche na-enye na bonuses na-akwalite ha website. Ego codes ga nwere a set oge ịgba.
Ego Isetịpụ The admin nwere ike ịtọ Debanye aha na Ntuziaka bonuses.
Ikele Pack Management The admin nwere ike ịtọ dị iche iche ikele Ukwu tinyere free akwụmụgwọ. The admin nwere ike tinye, dezie ma ọ bụ hichapụ onye ọ bụla na-agwa Pack.
Help / FAQ Management Kere Help na FAQ peeji nke tinyere a nkọwa.
IP Block The admin nwere ike igbochi ọ bụla IP maka inwekwu website ohere.
Gbanwee Password The admin nwere ike ịgbanwe ha akaụntụ paswọọdụ si ebe a.
Auto relist na akpaaka ndepụta auctions
Nbanye na Facebook ma ọ bụ Twitter
ọtụtụ addons / plugins na optiona atụmatụ
E dere n'oge a frameworks pụtara ọ bụ mụ na prediktebul
Your Email (chọrọ)
Your Phone (chọrọ)
New Dropship Adon na Imea nwere nkwado maka Doba na MegaGoods, ọzọ dropshippers na-kwukwara na-esote ụbọchị ole na ole. Bilie na-agba ọsọ na a ụlọ ahịa dị na a ole na ole dị mfe clicks
Ewebata theming anyị 20+ ndebiri, sub template combos…na fọrọ nke nta 30 gburugburu na-eto eto…i nwere ike ugbu a ike n'elu 500+ kpamkpam pụrụ iche na aghụghọ. ọtụtụ dabere na ememe
Dynamic Language Support, ka gị na saịtị iru ndị ọzọ ndị mmadụ
New Adon na Imea maka Penny Auctions, Ịzụ ahịa na naa koodu…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (naa, shopping ma ọ bụ auctions…ebay auctions abịa site ọgwụgwụ nke afọ BTW). Nke a Adon na Imea-arụ ọrụ maka ngwaahịa na meta tags ugbu a, ma na-achọ a google akaụntụ maka ha translation API. […]
Mmadụ Bịa Iji Penny Auction Software